नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ २८, २०७६, ०६:३५
नयाँ दिल्ली- भारतको गुड्गाउँ तीव्र रुपमा विकासको फड्को मारिरहेको सहर हो। केही समय अघिसम्म गुड्गाउँ सहरको सबैभन्दा व्यपारिक सेन्टर मानिन्थ्यो, एम्बियन्स मल।
१९ वर्षअघि खुलेको, भारतभर १२ ब्राञ्च फैलाइसकेको हेयर एन्ड शान्ति सैलुनले साढे २ सयलाई रोजगारी दिलाएको छ।
नेपालमा दरबारमार्ग, ठमेलस्थित छाया सेन्टर, जावलाखेल, चितवनको नारायणगढमा पनि ब्राञ्च खोलिसकेको छ यो सैलुनले।
नेपालमा सबै शाखा गरेर ६० जनाले रोजगारी पाएका छन्। हेटौंडा, बौद्ध र पोखरामा नयाँ 'ब्राञ्च' सुरु हुँदैछन्।
यसै वर्षको तिहारसम्म हेटौंडाको शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
आखिर एक सामान्य नेपाली महिला कसरी सफलताको यो बिन्दुमा पुगिन् त?
नेपालमा नारायणघाट, चितवन स्थायी ठेगाना भएकी अनुजाको त्यो कथा थाहा पाउन २५ वर्षअघि फर्किनुपर्ने हुन्छ।
अनुजा सन् १९९४ मा प्लस टु पूरा गरेर नयाँ दिल्ली घुम्न पुगिन्।
त्यतिबेला उनकी दिदी शान्तिले नयाँ दिल्लीमा ब्युटी पार्लर सञ्चालन गरेकी थिइन्। दिदीकै सैलुनमा अनुजाले काम गरिन्। सैलुनमा सेलिब्रिटीहरुसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो। सेवाग्राहीहरुसँग पनि सम्बन्ध बाक्लिँदै जान थाल्यो। दिदीको सैलुनमा काम गर्दागर्दै अनुजाले धेरै कुरा सिकिन्।
त्यसै क्रममा उनले फेसन डिजाइनिङको कोर्स पनि गरिन्। फेसन डिजाइनिङतिर उनको ध्यान मोडिएन।
सन् १९९७ मा हेयर ड्रेसरको तालिम लिएकी अनुजलाई कताकता दिदीले अँगालेकै व्यवसायमा हात हाल्न मन लाग्यो।
१७ वर्ष हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा काम गरेका कर्साङ, दार्जीलिङका भरत थापालाई यति लामो समय बितेको पत्तै भएन।
‘मैले काफी स्ट्रगल गरेँ,’ दार्जिलिङकै लवजमा उनले भने, ‘तर यहाँको प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ। अनि त यहाँ सबै खालको काम गर्न पाइन्छ।’
यो सैलुनमा स्टाफहरूलाई एकै प्रकृतिमा काममा लगाइँदैन।
बाहिर बसेका उनका सहयोगीहरुलाई सैलुनमा काम गर्ने स्टाफहरूले अगाडि नै सोधेका थिए, उहाँ को हुनुहुन्छ?
‘उहाँ उद्योगपति हुनुहुन्छ,’ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगीहरुले जवाफ फर्काएका थिए।
स्कुल, कलेज पढ्दा यही बन्छु भन्ने अनुजाको मनमा केही थिएन। जुन लाइन समातिन्, त्यसैमा सन्तुष्ट छिन्।
‘म जहाँ छु, जे छु मेरा पति राजकुमार श्रेष्ठ र दिदी–भिनाजुलाई यसको श्रेय जान्छ,' उज्यालो मुहार बनाउँदै उनी बोलिन्, ‘उहाँहरुकै कारण म सफल छु।’
‘अब थप योजना के छ?’ हेयर एन्ड शान्ति सैलुनकी अनुजालाई सोधियो।
‘नेपालबाट धेरैजसो युवा पुस्ता रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भनिन्, ‘थप सैलुनहरु खोलेर रोजगारी दिलाउने इच्छा छ।’